थाहा पाउनुहोस् : सुख्खा नरिवल खाँदा महिला पुरुषलाई हुन्छ यती धेरै फाइदा ! – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / थाहा पाउनुहोस् : सुख्खा नरिवल खाँदा महिला पुरुषलाई हुन्छ यती धेरै फाइदा !
admin January 31, 2022 स्वास्थ्य Leaveacomment 95 Views
नरिवल विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । पानी भएको नरिवल, जटा भएको नरिवल र सुख्खा नरिवल । विभिन्न प्रकारका नरिवल स्वास्थ्यको दृष्टिले निकै फाइदाजनक मानिन्छ । नरिवल स्वादिष्ट हुनुका साथै स्वस्थवद्र्धक पनि हुन्छ । त्यसैले धेरै मानिसहरुले यसलाई आफ्नो खानामा समावेश गर्छन् । नरिवलको सेवन सबै उमेरका मानिसहरुका लागि आवश्यक हुन्छ । विशेषगरी महिलाले सुख्खा नरिवल किन खानुपर्छ भनेर यहाँ जानकारी दिइँदैछ
सुख्खा नरिवलमा पोषक तत्वःभिटामिन बीसिक्स:– क्याल्सियम:– एन्टीअक्सिडेन्ट्स:महिलाका लागि सुख्खा नरिवलका फाइदाःसुख्खा नरिवल खाँदा स्वास्थ्यले विभिन्न प्रकारको लाभ पाउँछ । यदि तपाईं यसको नियमित सेवन गर्नुहुन्छ भने तपाईं मुटुरोगबाट बच्न सक्नुहुन्छ । साथै गर्भावस्थामा पनि यसको सेवन गर्न सकिन्छ । सुख्खा नरिवलले महिलामा हुने यूटीआईको समस्याबाट पनि राहत प्रदान गर्छ । सुख्खा नरिवलका फाइदा यस प्रकारका छन्ः
४. गर्भावस्थामा फाइदाजनक छ सुख्खा नरिवलःसुख्खा नरिवललाई गर्भावस्थाका बेला पनि निकै सहज तरिकाले खान सकिन्छ । यसले महिलाको रोग प्रतिरोधी क्षमता बलियो बनाउँछ । साथै, यो तपाईंको भ्रुणका लागि पनि फाइदाजनक छ । नरिवलमा फ्याटी एसिड हुन्छ जसले शिशुको विकास र वृद्धिमा मद्दत गर्छ । त्यसैले गर्भावस्थामा तपाईंले सुख्खा नरिवलको सेवन कुनै न कुनै रुपमा पक्कै पनि गर्नुपर्छ ।५. प्रतिरोधी क्षमता:सुख्खा नरिवल पोषक तत्वले भरपुर हुन्छ । यसमा भिटामिन, क्याल्सियम, म्याग्निज, प्रोटिन र आइरन निकै राम्रो मात्रामा पाइन्छ । यस्तोमा यसको सेवनले तपाईंको प्रतिरोधी क्षमतालाई बढाउन सकिन्छ । सुख्खा नरिवलले तपाईंको प्रतिरोधी क्षमता बढाएर रोगबाट लड्न पनि सहयोग गर्छ ।
७. पिसाबको संक्रमणबाट जोगाउँछःमहिलाले धेरैजसो पिसाबको संक्रमणसँग जुध्नुपर्छ । नरिवलको सेवन गर्दा पिसाबको संक्रमणबाट जोगिन सकिन्छ । वास्तवमा नरिवलले पिसाबको संक्रमण पैदा गर्ने ब्याक्टेरिया रोक्छ । नरिवल खाँदा युटिआईजस्तो गम्भीर संक्रमणलाई पनि रोक्न सकिन्छ । योनीलाई स्वस्थ राख्नका लागि पनि तपाईं नरिवलको सेवन गर्न सक्नुहुन्छ । नरिवल पानीले पिसाबको संक्रमणलाई जोगाउने गर्छ
Previous को,रोना भा,इरसको दोहोरो संक्रमण : पहिले र अहिले के फरक ?
Next उत्तर कोरियाको मिसाइल परीक्षण : अन्तरिक्षबाट खिचेको तस्बिर सार्वजनिक